ကြယ်ပြာရဲ့ အိမ်ကလေး: 2013
Credit to http://photosof.org/ for Image
ပုံစံမကျမှုတွေထဲ ပုံစံကျမှုတစ်ခုကို နှစ်မြုပ်ကြည့်လိုက်သောအခါ
မျှော်လင့်ချက်တွေက မျက်လုံးတွေထဲမှာ သူတစ်လူ ငါတစ်မင်းနဲ့ အချင်းများကြတယ် …..
ဖြက်ကနဲလက်သွားတဲ့ အလက်က ဘယ်အထိ အရွေ့ရှိမလဲဆိုတာ
ငါ၊ သူတစ်ပါး …. အရောင်လက်ပုံချင်းတူရင်တောင် ရသချင်းကွဲလိမ့်မယ် …
ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သက်သေမဲ့ စကားအများကြားမှာ တလူးလူး တလိမ့်လိမ့် ……
ကိုယ်ချင်းစာတယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ကြုံမှဆိုတာ လူတွေ မှတ်မိပုံမရကြဘူး ……
သို့မဟုတ် သိကြပုံမရဘူး ….
စိတ်ပျက်ခြင်းတွေသာ တရိပ်ရိပ်တက် ……………
၂၂၊ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၁၃
Posted by ကြယ်ပြာ at 7:01 AM2comments Links to this post
သူငယ်တန်းကျောင်းအပ်တုန်းက အရင်အပ်တဲ့သူက တန်းခွဲ(အေ) မှာနေရတော့ ကျောင်းအပ်စောတဲ့ကျမကတန်းခွဲ(အေ)ကိုရောက်တယ်။
တစ်တန်းရောက်တော့ အမှတ်တွေနဲ့ အခန်းပြန်ခွဲတော့ စာသိပ်တော်လွန်းတဲ့ကျမက တန်းခွဲ(ဘီ) ရောက်သွားတယ်။ အဲ့လို တစ်တန်းမှာ တန်းခွဲ(ဘီ) ရောက်လို့လည်း ကျမမှာထွေထွေထူးထူး ၀မ်းနည်းမိတာမရှိခဲ့ဘူး။ မရှိဆို ကျမသူငယ်တန်းတုန်းက လူ အယောက် (၃၇) ယောက်မှာ အဆင့် (၃၂) ရတာကို ပျော်လွန်းလို့ အိမ်ကို ခုန်ပေါက်ပြေးလွှားပြီး အမေ့ကိုကြွားရတာ အမောပေါ့။ နောက်တော့ အမေ ပြောမှသိတယ် အဲ့ဒါ “ညံ့” တာတဲ့။ ဒါလည်း မမှုပါဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူငယ်တန်းကနေ တစ်တန်း၊ နှစ်တန်းကို စာမေးပွဲသွားမဖြေ၊ အောင်စာရင်းသွားမကြည့်ပဲ ရောက်သွားတယ်လို့ ကို
သုံးတန်းရောက်တော့မှ စာတော်တဲ့သူကို ဆရာမတွေချစ်တယ်ဆိုတာကို ကျမစသိတတ်လာတယ်။ ဆရာမတွေဟာ ကျမတို့ အမှတ်တွေ ကြေငြာတိုင်း အေခန်းက လူတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ် နှိမ်ကွပ်ပြောလေ့ရှိတယ်။ ခု အသက်ကြီးလာတော့ ဆရာမတွေ နှိမ်ပြောခဲ့တယ်ဆိုတာက ကြိုးစားချင်စိတ်ရှိအောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ ပြောင်းတွေးမိပါတယ်။ နောက်ပြီး တော်တဲ့အခန်းမှာ နေချင်စိတ်အဲ့ဒီအရွယ်မှာ စဖြစ်ပါတယ်။
ကျမ သုံးတန်း(ဘီ) ခန်းမှာတော့ သိပ်မညံ့ဘူးရှင့်။ အဆင့်(၁) ကနေ (၁၀) အတွင်းတော့ အမြဲဝင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘီခန်း (၁) ကနေ (၁၀) ဆိုတာအေခန်း သာမန်တွေလောက်ပဲရှိတယ်လေ။ ကဲ ထားပါဦးလေ… အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ကျမသူငယ်ချင်းတွေက ခင်နွယ်နွယ်ထွန်း၊ ကျော့ကေခိုင်၊ ဆွေဇင်ထွန်း၊ လှိုင်ဘုန်းမြင့် နှစ်ယောက်တွဲထိုင်ခုံတွေမှာ နှစ်ယောက်တတွဲစီပေါ့။ အဲ့ဒီထဲမှာမှ လှိုင်ဘုန်းမြင့် နဲ့ ဆွေဇင်ထွန်း ကိုမှတ်မှတ်ရရဖြစ်တယ်။ဖြစ်ဆို အမှတ်ရစရာတွေကလည်း ရှိခဲ့တာကိုး။
လှိုင်ဘုန်းမြင့်က ကျမကို ပြောတယ်။ သူက သူငယ်တန်းမတက်ခင်က လေယာဉ်မယ်လုပ်ခဲ့တာတဲ့။
သူငယ်တန်းတက်မှာမို့ အဲ့ဒီအလုပ်ကထွက်ခဲ့တယ်လို့ ကျမကိုပြောတယ်။ ကျမလေ ပါးစပ်လေး ဟောင်းလောင်းနဲ့ အထင်ကြီးလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့။ ကျမသိတာက လေယာဉ်မယ်ဆို လှတယ်။ ကျော့ကျော့လေး မော့မော့လေးပေါ့။ သူကလည်းဖြူဖြူလေးနဲ့ ချစ်စရာလေးဆိုတော့ ကျမလည်းယုံမိတာပေါ့လေ။ (အမှန်က ပိန်းတာ ဟီး ဟီး)
နောက် ဆွေဇင်ထွန်းကကျတော့ ဇာတ်လမ်းတွေဆင်ပြီး အရုပ်နဲ့ ကစားကြတဲ့နေရာမှာသိပ်တော်တယ်။
သူကဖြူဖြူလုံးလုံး တရုတ်မလေး။ ကျမတို့ငယ်ငယ်တုန်းက စက္ကူပေါ်မှာ အရုပ်ဆွဲ ကဒ်ထူနဲ့ကပ်။ အင်္ကျီမျိုးစုံ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဆွဲပြီး ဇာတ်လမ်းဆင်ဆော့ကြတာ။
ကျမမှာ ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့ မိန်းမတစ်ရုပ်၊ ယောက်ျားတစ်ရုပ်ရှိတယ်။ အင်္ကျီတွေဆိုလည်း အများကြီးပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျမက ဇာတ်လမ်းမပြောတတ်ဘူး။
အရုပ်တွေနဲ့ စက္ကူအင်္ကျီတွေကို ဖတ်စာအုပ်တွေ ကြားထဲညှပ်ပြီး ကျောင်းကိုယူလာကြတယ်။ ဆရာမရှေ့ဆော့မိရင် အသိမ်းခံရလို့ အတန်းချိန်ပြောင်းပြီဆိုရင်
ခုံအောက်ကို ဆင်းထိုင်ပြီး ဆော့ကြတော့တာပဲ။ အဲ့ဒါနေ့တိုင်းနီးပါးဆော့တာ။
ဒီလိုနဲ့ ဆော့လိုက်၊ စာသင်လိုက်နဲ့ တဖြေးဖြေး အတန်းတင်စာမေးပွဲကြီးနီးလာပါရောလား။
မြန်မာစာဖြေတဲ့နေ့၊ အင်္ဂလိပ်စာဖြေတဲ့နေ့ အားလုံးအဆင်ပြေတယ်။
သင်္ချာနေ့ … ဇာတ်လမ်းကစပြီ။ ကျမကစာရတယ်။ ဒါပေမယ့် စာမေးပွဲဖြေရင်း အမှတ်(၄၀) ဖိုးလောက်ပဲဖြေရသေးပြီး အိပ်ချင်လာတာနဲ့ စားပွဲပေါ်မှောက်အိပ်မိသွားရော။
သင်္ချာတို့၊ အင်္ဂလိပ်တို့က စောပြီးတတ်တာမို့ အတန်းစောင့်ဆရာမကလည်း ပြီးလို့အိပ်တယ်ထင်ပြီး သူကလည်း မနှိုး၊ ကိုယ်ကလည်း မထနဲ့ ပထမခေါင်းလောင်းထိုးတဲ့အချိန်မှာ ကျမနိုးလာတာပေါ့။
အဲ့ဒီကျမှ ကျမဖြေထားတာပြန်ကြည့်မိတော့ အောင်မှတ်လေးတင်ရှိသေးတယ်။ အချိန်ကလည်း ၅ မိနစ်ပဲကျန်တော့တယ်။
တခုခုများမှားလို့ကတော့ ကျပြီပဲလို့တွေးလိုက်မိတာနဲ့ ကျမ တဗြဲဗြဲ နဲ့ငိုပါလေရောလား။
ကျမတို့စာမေးပွဲခန်းကို ဆရာမနှစ်ယောကစောင့်တယ်။ တစ်ယောက် ဆရာမဒေါ်တင်မိုးအေးဆိုတဲ့ ဆရာမ။ နောက်တစ်ယောက်ကိုတော့ ကျမ မမှတ်မိတော့ဘူး။ ကျမက အသည်းအသန်တွေငိုနေတော့ ဆရာမကပါ ငိုရော။
ဆရာ၊တပည့်နှစ်ယောက် ငိုရင်း ဒုတိယခေါင်းလောင်းထိုးသွားတော့ ကျမဆက်ဖြေလို့ မရတော့ဘူးလေ။ ဆရာမက ငိုရင်းနဲ့ပဲ ကျမတို့ ကျောင်းဂိတ်ဝထိလိုက်ပို့တယ်။ ကျမကလည်း ငိုရင်းပါသွားတာပေါ့။
ဆရာမက အမေ့ကို အကျိုးအကြောင်းမေးတော့ အမေက အ၇မ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ပေမယ့် ကျမကငိုနေတော့ မဆူရက်ဘူး။
အမှန်ဆို အမေက စိတ်ဆတ်တယ်၊ ငိုတာလည်းသိပ်မကြိုက်လှဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျမက တလမ်းလုံး ရှိုက်ကြီး တငင်ငိုနေတော့ အမေက စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး စိတ်သက်သာအောင်
“သမီး အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲစားမလား” တဲ့ဆိုပြီးချော့ရှာပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာ ကျမက“စားမယ်” လို့ပြောရင်း အလုံဘူတာနားကဆိုင်မှာစားကြတယ်။
ကျမက စားရင်း၊ ငိုရင်း တစ်ပွဲလည်းကုန်သွားရော မျက်ရည်ဝိုင်းတဲ့ မျက်လုံးကြီးတွေနဲ့ အမေ့ကို မော့ကြည့်လိုက်ပြီး အမေ့ကို စကားတစ်ခွန်းပြောလိုက်တယ်
“မေကြီး သမီးမ၀သေးဘူး နောက်တစ်ပွဲစားချင်တယ်” လို့ …………
အမေက စားမေးပွဲမဖြေနိုင်ရတဲ့ကြားထဲ ငတ်ကြီးကျနေတဲ့ သူ့သမီးကို စိတ်တိုပေမယ့် စိတ်တိုရအခက်ဖြစ်နေတဲ့ပုံကို ခုထိမြင်ယောင်တုန်း ဟိဟိ....
မှတ်မှတ်ရရ ကျမသုံးတန်းတုန်းက အတွေ့အကြုံလေးပါ။ အဲ့တုန်းက တကယ်ကို ၀မ်းနည်းငိုကြွေးခဲ့ရတာပေမယ့် ခုချိန်ပြန်စဉ်းစားတော့ ရယ်ချင်စရာလေးမို့
Posted by ကြယ်ပြာ at 9:06 AM2comments Links to this post
"ငယ်ဘ၀ အတွေ့အကြုံများ (၂)"
ဒုတိယတန်းမှာ ကျမအတွက် အမှတ်ရစရာသိပ်များများစားစားမရှိလှဘူး။ မှတ်မိတာလေးတစ်ခုက မုန့်စားနေတုန်း ဆရာလာလို့ပြေးရတာလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်။
အဟမ်း .. အဟမ်း ..... အစားငမ်းတဲ့ ကြယ်ပြာပိစိကလေး အကြောင်းပေါ့ ....
ကျမတို့ ကျောင်းက အထက်တန်းကျောင်းပေမယ့် မုန့်စားဆောင်မှာ မုန့်ဆိုင်တွေတော့ သိပ်မမြိုင်လှဘူး။ မုန့်စားဆောင်နားရောက်ရင် ပထမဆုံးတွေ့ရမှာက ရေခဲချောင်းကို တွန်းလှည်းနဲ့ ရောင်းတဲ့ ရေခဲချောင်းသည်အစ်ကိုကြီး။ သူက ကျမသူငယ်တန်းကနေ ၁၀ တန်းရောက်တဲ့ထိ အဲ့ရေခဲချောင်းလှည်းလေးနဲ့ ရေခဲချောင်းရောင်းရင်းနဲ့ပဲ တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးခဲ့တာ။
သူတင်ပဲလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ဘူး တခြားဆိုင်တွေလည်း လူမပြောင်းသွားကြဘူး။
နောက် သူ့နောက်ဘက်မှာကျတော့ ကပ်စေးနဲ၊ ဝေဖာယိုသုတ် စတာတွေကိုရောင်းတဲ့ တွန်းလှည်းနဲ့ အသည်ကြီး ရှိတယ်။ သူတို့က လင်မယားလား၊ ယောက်ကရှာအစ်မကြီးရောင်းတာလား မမှတ်မိတော့ဘူး။
နောက် အဲ့နားလေးမှာပဲ နို့အေးချောင်းနဲ့ ဒါးလှီိးရေခဲမုန့်ရောင်းတဲ့ မုတ်ဆိတ်ဗလဗျစ်နဲ့ လူကြီး။ သူက ဒါးလှီးရေခဲမုန့်ရောင်းတာများတယ်။ နို့အေးချောင်းကိုကျ တခါတရံမှရောင်းတယ်။ သံခွက်ကလေးတွေထဲကို နို့တွေထည့်ပြီး ရေခဲခွက်အ၀ိုင်းကြီး တဂျွမ်းဂျွမ်းလှည့်ရင်း ရလာမယ့် နို့အေးချောင်းကို ကျမအပါအ၀င် ကလေးတွေ မက်မက်စက်စက် ရှိလှတယ်။
သူ့ပါးစပ်က ရွတ်လေ့ရှိတာလေးကိုလည်း ကျမမှတ်မိနေတယ်
"အိုင်စီး ယူစီး နှစ်ယောက်စီးတော့ ပြုတ်ကျ" တဲ့ ......း)
နောက် မုန့်စားရုံအစ ညာဘက်မှာကျတော့ မန်ကျည်းဖျော်ရည်သည် မိသားစု။
ဘယ်ဘက်မှာကျတော့ ကျောင်းစောင့် ဦးကုလားရဲ့ အမေ ဘွားကျုတ်နဲ့ သူ့မိန်းမ မတင်အုံးတို့က မုန့်ဟင်းခါး၊ အုန်းနို့၊ ခေါက်ဆွဲသုပ်၊ ကြာဇံသုပ်၊ ၀က်သားဒုတ်ထိုး၊ ပြောင်းဖြူးပြုတ်၊ မြေပဲပြုတ်၊ ထန်းမြစ်၊ ပဲမြစ်၊ ဆီးသီးပေါင်း စတာတွေကိုရောင်းတယ်။
နောက် ဟိုးဘက်ထောင့်လေးမှာကျတော့ ဆီးထုတ်၊ ချိုချဉ်၊ နေကြာစေ့၊ သကြားလုံး၊ နံကထိုင် အစရှိတဲ့ ရယ်ဒီမိတ်မုန့်မျိုးစုံရောင်းတဲ့ မမြင့်စိန်တို့ဆိုင်။
ကဲ ... ဒါလေးပဲ ကျမဆို့ မုန့်စားရုံမှာရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အမယ်တွေတော့ စုံလှတယ်။ လုံလောက်တယ်လို့ပြောလို့တော့ရတာပေါ့။
ကျမ အကြိုက်ဆုံးအစားအစာက ဘွားကျုတ်ရောင်းတဲ့ ခေါက်ဆွဲသုပ်ပဲ။ တကယ်က ခေါင်ဆွဲသုပ်ဆိုလို့ ရှယ်သုတ်တော့ မဟုတ်ဘူး။ ခေါက်ဆွဲကို ဂေါ်ဖီနဲ့ ရောကြော်ထားတယ် နောက် အချဉ်ရည်နဲ့ ရောနယ်ပေးလိုက်တဲ့ မည်ကာမတ္တ အသုပ်။ ဒါပေမယ့် သိပ်အရသာရှိတယ်။ မနက်တိုင်း ကျမ အဲ့ဒါ မစားရရင် မနေနိုင်ဘူး။ ဒုတိယအကြိုက်ဆုံး မုန့်က ရွှေပုစွန်က နံကထိုင် (အခုတော့ မကြိုက်တော့ဘူး)။ မမြင့်စိန်တို့ဆိုင်က နံကထိုင် ၁ ခုကို ၃ မတ်။ ကျမ မုန့်ဖိုးက ၁ ကျပ် ခွဲ။ ခေါက်ဆွဲသုပ်က ငါးမူး ဆိုတော့ ကွက်တိပဲ (စုတောင် မစုနိုင်ဘူး )
ကျမတို့ကျောင်းလေးက သူများကျောင်းတွေလိုပဲ ပထမကျောင်းတက်ခေါင်းလောင်ထိုးရင် ကျောင်းသားတွေအကုန် အတန်းထဲမှာရှိပြီး ဘုရားရှိခိုးရတယ်။ ကျမက တခါတလေ နောက်ကျတတ်တယ်။ ကျောင်းရောက်တာနဲ့ ကျမရဲ့ပထမဆုံးအလုပ်က လွယ်အိတ်ပစ်ချပြီး ဘွားကျုတ်ဆိုင်ကို ပြေးတာပဲ။ ဘယ်လောက်အိမ်ကပဲ စားလာရပါစေ ဘွားကျုတ်အသုတ်ကို နေ့တိုင်းစားရမှ စိတ်ထဲအာသာပြေတယ်။ ခေါင်းလောင်းထိုးသွားရင် ဒု-ကျောင်းအုပ် ခေါင်းဖြူဆရာကြီးက မုန့်စားရုံကို ပတ်စစ်လေ့ရှိတယ်။
ကျမက အစာစားရင် သိပ်မ၀ါးပဲ မျိုချလေ့ရှိတာ ငယ်ကတည်းက အကျင့်ဆိုပါတော့။ တနေ့ ကျမ အပူတွေကန်လို့ အာခေါင်တွေမှာစင်းကြောင်းတွေထပြီးရေသောက်ရင်တောင် နာနေတဲ့အချိန်မှာ ကျမကျောင်းချိန်ကွက်တိရောက်သွားတယ်။ မနက်စာ စားချိန်မရှိတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျမရဲ့ တဇွတ်ထိုးထုံးစံအတိုင်း မုန့်ဆိုင်ကိုပြေးတယ်။ အသုပ်စားတော့ ထင်သလောက် ခရီးမရောက်ဘူး အာခေါင်က နာနေတာကိုး။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ခေါင်းဖြူဆရာကြီးကလာနေပြီ ကြိမ်လုံးကလည်း တ၀င့်ဝင့်။ အသုပ်ကလည်း တန်းလန်း မျိုချလို့ကလည်းမရ ဖြတ်ချလို့ကလည်း အဆင်မပြေ။ ပါးစပ်မှာ ခေါက်ဆွဲတန်းလန်းစားရင်းနဲ့ ဆိုင်တွေနောက်ဘက် ပတ်ပြီး ပုန်းရတယ်။ ပါးစပ်ကလည်းအစားမပျက်၊ လူကလည်း ကုန်းကွပုန်း၊ ဆရာကြီးပြန်ပြီလားလည်းချောင်းကြည့်ရနဲ့ တော်တော်ကို ကိုးယိုးကားယားနိုင်ခဲ့တာ။ ဒါပေမယ့်လေ ကျမခေါက်ဆွဲသုပ်ကို ပြေးရင်းလွှားရင်း အောင်မြင်စွာ ကုန်အောင် စားနိုင်ခဲ့တယ်။ အရိုက်လည်း မခံရဘူး။
မှတ်မှတ်ရရ ရင်ခုန် (ကြိမ်လုံးစာကြောက်လို့)၊ စိတ်မော၊ ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်လေးတစ်ခုပေါ့။
သူငယ်ချင်းတွေလည်း ပြုံးပျော်နိုင်ကြပါစေ .......
Posted by ကြယ်ပြာ at 9:47 PM4comments Links to this post
"ငယ်ဘ၀ အတွေ့အကြုံများ (၁)"
ဘာရယ်မဟုတ် ... သူများတွေကျောင်းသားဘ၀အကြောင်းရေးတာမြင်ရင်း ကိုယ့်ငယ်ဘ၀လေးက အမှတ်တရလေးတွေ ပြန်သတိရမိတယ်။
- ပထမဆုံး သူငယ်တန်းတက်တဲ့နေ့က ကိုယ့်ကိုလည်းမြင်ရော အခန်းထဲက ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်က ပြေးလာပြီး ကိုယ့်ကို အတင်းဖက်ပြီး ပါးကိုနမ်းတာ မမေ့ဘူး။
သူနမ်းတဲ့ အကြောင်း ကိုယ်က အိမ်မှာ ပြန်ပြောပြမိတော့ တမိသားစုလုံး ၀ိုင်းဟားလို့ အော်ကြီး ဟစ်ကျယ် ငိုရတာလည်း မမေ့ဘူး။
- အမေက ပြောတယ်ကျောင်းလွှတ်ချိန်ဆို ကလေးတွေ အများကြီးကြားမှာ ကိုယ့်ကလေးကိုယ်ရှာရတာ မူးတောင် မူးတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် ငါ့သမီးကတော့ ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုပဲ။ အမေကျောင်းလာကြိုတော့ ပါးစပ်ကြီး တခုလုံး ရဲပဒေါင်းခတ်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေ ကြားထဲ ပြူးပြဲနေတဲ့ သူ့သမီးကို အမေက တန်းကိုမြင်တာ။ အမေက ပါးစပ်ကြီးနီရဲနေတော့ လန့်သွားရှာတာပေါ့။ တကယ်က ဘေးနာက ကုလားမလေးက သူ့အိမ်က ဒါန်းသီးကိုယူလာပြီး အဲ့ဒါနဲ့ နှုတ်ခမ်းနီဆိုးလို့ရတယ်ဆိုပြောပြီး စာရေးခုံမှာ သွေးပေးတယ် ကိုယ်ကလည်း အဲ့ဒါတွေ ကောက်ကောက်ပြီး နှုတ်ခမ်းကို ဆိုးပစ်တာ....
ခု ပြန်တွေး ခုရယ်ချင်တယ် လှချက်ရက် စက်စက်ယိုပဲ
ဒီတစ်ခါတော့ ကျမက ဆရာမစကားကို သိပ်နားထောင်တဲ့ ကလေးလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာကို ပြောပြချင်တာပါ။
မူလတန်းကလေးတွေဟာ အားရင် အပေါ့သွားဖို့ပဲ အမြဲ ခွင့်တိုင်လေ့ရှိတယ်။ ကျမကလည်း အဲ့ဒီအမျိုးအစားထဲမှာပါတယ်။ အဆော့ကလဲ အင်မတန်မက်တယ်။
တနေ့ပေါ့ ... ကျမ အရင်လို အပြင်ထွက်ချင်လို့ အပေါ့သွားမယ် ခွင့်တိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ တကယ်ကို အပေါ့သွားချင်နေခဲ့တာ။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ ၀င်နေတဲ့ ဆရာမက မျက်နှာတည်လွန်းတော့ ကလေးတွေက ကြောက်ကြတယ်။ (စကားချပ်။ ။ တကယ်က ဆရာမသိပ်သဘောကောင်းတာ နောင်မှသိလာတယ်။) ကျမလဲ ဆရာမကိုသိပ်ကြောက်ပေမယ့် အပေ့ါကအရမ်းကို သွားချင်နေပြီဆိုတော့ ကြောက်ကြောက်နဲ့ပဲ လက်လေးပိုက် လက်ညှိုးလေး နှုတ်ခမ်းနားကပ်ပြီး
"ဆရာမ သမီးအပေါ့သွားချင်လို့ပါ" ဆိုလိုက်တော့ ဖျက်ကနဲ ကြည့်လိုက်တဲ့ဆရာမ မျက်လုံးကိုလန့်လိုက်တာ ဆိုတာ တအားပဲ။
ဆရာမက "နင်တို့တွေ အားနေ အပေါ့သွားမယ်ချည်းပဲ။ မသွားနဲ့ " တဲ့ ....
ကျမလည်း "ဆရာမ သမီး တကယ်အပေါ့သွားချင်လို့ပါ" လို့ အရဲစွန့် ပြောရပြန်ရော။ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သာသိလေ။ ထွက်က ထွက်ကျတော့မယ်။
ဆရာမက "မအောင့်နိုင်ရင် အတန်းထဲ ပေါက်ချလိုက်" တဲ့ ......
ကျမကလေးဥာဏ်လေးနဲ့ စဉ်းစားတယ်။ ကျမအတန်းထဲမှာ ပေါက်ချရင် ဘောင်းဘီတွေစို၊ သေးနံ့တွေနံရင် ရှက်ရကောင်းမှန်း ကျမသိတယ်။ ဒါပေမယ့် အောင့်ကလည်းမအောင့်နိုင် ဆရာမက ရွဲ့ပြောတာကို ခွင့်ပြုတယ်လို့ စိတ်ထဲယူဆပစ်လိုက်တယ်။ ကျမဘေးမှာ ထိုင်တာက အရပ်ရှည်ရှည်နဲ့ ကုလားမလေးတစ်ယောက်။ ကျမက သူ့ကို ပြောလိုက်တယ်။
"ဟဲ့ ဆရာမက ပေါက်ချင်အတန်းထဲပေါက်လို့ ပြောတယ်။ ငါ ခုံအောက်ဝင်ပေါက်မလို့ ကွယ်ပေး" လို့ ပြောတော့ သူက ကွယ်ပေးတယ်။
ကျမလည်း ခုံအောက်ဝင်ပြီး ပေါက်ပစ်လိုက်တာပေါ့။ သေးတွေက သံမံတလင်းမှာ ကျမနေရာကနေ ဘေးကို စီးကြောင်းနဲ့ စီးလို့ .... ကိုယ်က ခပ်တည်တည်ပဲ စာလုပ်နေလိုက်တယ်။ အတန်းချိန်ကုန်ခါနီးတော့ ဆရာမက ကလေးတွေစာအုပ်ကို ပတ်ကြည့်တာပေါ့ ။ ကိုယ့်ဘေးလည်းရောက်ရော သေးစီးကြောင်းကိုတွေ့ရောဆိုပါတော့ ။ ဆရာမက ဟဲ့ ဘာတွေတုန်းဆိုတော့ ကလေးပိစိကျမက လိမ်တတ်တယ်ဗျ။
"ရေဗူးဖိတ်တာ ဆရာမ" တဲ့ ဖြေလိုက်တယ်။
အဲ့မှာ ဘေးက ကုလားမလေးက "မဟုတ်ဘူးဆရာမ မို့မို့အိအောင် ခုံအောက်ဝင်ပြီး သေးပေါက်တာ" လို့ အကျယ်ကြီးအော်ပြောတယ်။
အဲ့မှာ မို့အိတို့ ဂွမ်းပါလေရောလား။
"ဆရာမက အထဲမှာ ပေါက်ချင်ပေါက် ပြောလို့ သမီးပေါက်မိတာပါ" လို့ ငိုယိုပြီးပြောလာတဲ့ ကျမကို ကြည့်ရင်း သိပ်အရိုက်သန်တဲ့ ဆရာမမှာ ငိုအားထက်ရယ်အားသန်ခဲ့ရတယ်။
မှတ်မှတ်ရရ တစ်တန်းတုန်းကပေါ့ ။။။။။။
Posted by ကြယ်ပြာ at 9:06 PM 1 comments Links to this post
အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ ညာသံအစုံစုံအောက်မှာ
နွှဲခဲ့တဲ့ပွဲပေါင်းလည်း များလှပေါ့ ….
ကျုပ်ကိုယ်တိုင်က တိုက်ကြက် ……………………………………….
မြန်မာကားတစ်ကားမှ ကြက်တိုက်ပွဲမြင်ကွင်းကိုကြည့်ရင်း စိတ်ထဲပေါ်လာသမျှချရေးသည်။
Posted by ကြယ်ပြာ at 9:34 AM0comments Links to this post